Isbitaalka ku yaala magaalada Kismaayo oo deeq ay gaarsiisey marwada madaxweynaha Soomaaliya. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Isbitaalka ku yaala magaalada Kismaayo oo deeq ay gaarsiisey marwada madaxweynaha Soomaaliya.
Isbitaalka ku yaala magaalada Kismaayo oo deeq ay gaarsiisey marwada madaxweynaha Soomaaliya.
Deeqdan lacageed oo ka timid marwada madaxweeynaha dowladda Soomaaliya , Marwo Qamar Cali Cumar ayaa waxaa la gudoonsiiyay bukaanada jiifa isbitalka Kismaayo iyo qaar kamid ah dadka naafada ah ee ku nool Kismaayo.
Mahad Muxidiin Sheekh oo ay marwada Madaxweeynaha usoo wakiilatay deeqda ayaa gudoonsiiyay bukaanada Jiifa qeybaha kala duwan ee Isbitalka iyo sidoo kale qaar kamid ah dadka naafada ee ku nool Kismaayo.
Mahad Muxidiin oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in deeqdani lacageed ay tahay mid Marwada Madaxweynaha ay dooneeyso in ay uga farxiso dadka bukaanada ah ee jiifa Isbitalka iyo dadka kale ee danyarta ah, isagoo intaa ku daray in aysan tan ku ekaan doonin oo ay marwadu sii wadi doonto caawinta dadka danyarta ah.
Agaasimaha isbitalka Kismaayo Xuseen Sheekh Qaasim ayaa aad uga mahadceliyay Marwo Qamar Cali Cumar deeqda ay soo gaarsiisay isbitalka, isagoo ugu baaqay in madaxda kale ee Soomaaliya iyo cid walba oo wax heeysata ay ku daydaan islamarkaana gacan siiyaan walaalahooda dhibaateeysan.
Marwada Madaxweeynaha Soomaaliya, Marwo Qamar Cali Cumar ayaa deeq tan lamid ah hore u gaarsiisay dad danyar ah oo ku nool qeybo ka tirsan gobollada dalka Soomaaliya.
Previous articleDawladaha Brundi iyo dimuquratik republic of Congo oo Q/M ka dalbadey in dawlada Ruwanda talaabo laga qaado.
Next articleXisbiga uGu awooda badan mucaaradka dalka Uganda oo Booliska dalkaasi xaruntooda weerareen.